Iran: Mpamafa Làlana Nahita 500.000 Dolara Amerikana Ka Namerina Izany Tamin’ny Tompony · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Avrily 2012 11:30 GMT
Vakio amin'ny teny Português, عربي, Français, বাংলা, Ελληνικά, Filipino, srpski, македонски, Dansk, русский, English
Lohateny vaventy miresaka kolikoly an-tapitrisa maro matetika no hitantsika miranty amin’ireo pejy voalohan’ny gazety Iraniana. Tsy ela akory izay dia nisy vaovao mafàna mikasika hosoka lehibe taminà banky tao Iran, voalaza ho nataon’olona manao kopaka isasahana amin’ny governemanta.
Saingy tampoka teo, singam-baovao tsara iray no namiratra tao Iran sy tany ivelan’ny firenena : Mpamafa làlana iray antsoina hoe Ahmad Rabani avy ao Bojnourd, 700km miala an’i Tehran, no nahita 1 lavitrisa Toman (eo amin’ny 570.000 dollars Amerikana eo) ary namerina izany tamin’ny tompony .
Ho fisaorana azy, dia nomena 200.000 Toman (120 dollars Amerikana) izy ho valisoa.
Ilay bilaogera iraniana Unirani dia nidera ilay mpamafa làlana sy niantso ny fihetsiny ho lesona iray ho an’ireo manampahefana eo amin’ny Repoblika Islamika voarohirohy aminà kolikoly. Hoy ilay bilaogera manoratra[fa]:
… lehilahy iray avy amin’ny sarangan’ny mpiasa sady mpikambana iray avy amin’ny kaominina no nahita 1 lavitrisa Toman tanaty kitapo iray ary namerina izany tamin’ny tompony. Takatsika tsara ny maha-mendrika ny fihetsiny raha fantatsika fa niaina tanaty fahantrana izy noho ny halalin’ny olana ara-toekarena misy eto amin’ny firenena. Raha amin’ny maha-olona dia azony natao ny nikepoka ilay vola, niala tamin’ny asany, ary dia tonga iray amin’ireny mpanefoefo ireny. Saingy tsy nanao izany izy. Aoka izany ho lesona ho an’ireo olona mpangalatra sy mpanao kolikoly izay mangalatra ny zavatra rehetra eto amin’ny firenena sy mahatonga ny olana ara-toekarena tsy misy farany eto noho ny politika maloto ataony.
Bilaogera iray hafa, Pesarirouni no manoratra mikasika ity tantara ity ary mitenyhoe :
Mbola misy ny fahamendrehana … anatinà fotoana izay tsy hahaizan’ny mpirahalahy mifampitsinjo intsony … teraka tanaty fianakaviana avy amin’ny sarangan’ny mpiasa aho ary mahatsapa tsara ny olana rehetra atrehan’ireny olona ireny … Tena deraiko ny fahamendrehany, ary heverko fa tokony hahazo ny medalin’ny Voninahitra izy noho ny fihetsika nataony.
Del2del manoratra[fa] fa tsy maintsy nisedra fitsapàna oavana maro i Rabani talohan’ny hamerenana ilay vola, raha tombanany ho mitovy amin’ny karamanà mpamafa làlana mandritra ny 166 taona ilay izy.